टी–१० लिगः पारसको स्थान लिएका म्याडेसन १ रनमै आउट ! - Everest Dainik - News from Nepal
टी–१० लिगः पारसको स्थान लिएका म्याडेसन १ रनमै आउट !
काठमाडौंः यूएईमा जारी टी–१० क्रिकेट लिगमा मराठा अरेबियनले दिएको १ सय ३९ रनको लक्ष्य पछ्याई रहेको पारस खड्काआवद्ध टिम अवुधाबीले महत्वपूर्ण ३ विकेट गुमाएको छ ।
अवुधाबीले तेस्रो विकेटका रुपमा वेन म्याडेसनलाई १ रनमा गुमाएको हो । उनी ५.२ ओभरमा रनटआउट हुन पुगे । म्याडेसनलाई आज पारसको स्थानमा प्लेइङ ११ मा समावेश गरिएको थियो ।
यसअघि टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएको अरेबियनले निर्धारित १० ओभरमा २ विकेट गुमाएर १ सय ३८ रन बनायो । उसका लागि क्रिस लिनले शानदार ब्याटिङ गरे ।
याे पनि पढ्नुस टी–१० लिगः सन्दीपको टिमद्वारा बंगला टाइगर्सलाई ११५ रनको लक्ष्य
ट्याग्स: टी-१० क्रिकेट लिग